> Resource> iPad> Olee otú iji weghachi iPad mgbe Jailbreak
Olee otú m nwere weghachi m iPad mgbe a okpu inwale on jailbreaking?
Otu enyi m na gbalịrị inyere m aka jailbreak m iPad ma ọ na-emeghị, ma ugbu a m niile photos, na kọntaktị na ndetu na-efu! Olee otú m selectively weghachi ha si iTunes ndabere ?? Achọghị m ka m imelite ihe niile na m iPad. Onye ọ bụla PLS aka, Daalụ!
Mgbe ọ bụla ị na-agbalị jailbreak gị iPad ma ọ bụ ndị ọzọ iDevices, unu na-echeta na ndabere gị iPad n'ọdịnihu. N'agbanyeghị na ị n'ọnọdu ma ọ bụ na-emezughị, ị nwere ike na-gị iPad data mbụ. iTunes ndabere faịlụ adịghị ekwe ka ị ihuchalu ma ọ bụ selectively weghachi data si iTunes ndabere, ma ọ pụtaghị na ị gaghị eme ya n'ụzọ ọzọ. Na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, ị nwere ike mfe wepụ nkwado ndabere na mpaghara aka ya site onwe gị.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac iphone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) bụ ụdị nke ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji ya wepụ niile ọdịnaya nke gị iPad ndabere faịlụ ka ịhụchalụ na selectively naghachi ndị ị chọrọ ke 2 nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị na-izute otu nsogbu mgbe jailbreaking gị iPad, ọ ga-adị a oké oke maka gị.
Cheta na: Ọzọkwa, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac)-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi na-agbake data niile iPads enweghị ndabere faịlụ.
Download free ikpe mbipute a iPad Iweghachi software n'okpuru nwere a-agbalị.
Nzọụkwụ nke iweghachi iPad mgbe jailbreak
Tupu-eme iPad weghachi, adịghị mmekọrịta gị iPad na iTunes, na-ezere emelite nkwado ndabere na mpaghara eme gị data furu efu ruo mgbe ebighị ebi. Ọzọ, ka ịrụ mgbake na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na zuru ezu.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iPad si ndabere ka ike iṅomi
Na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac mgbe wụnye ya, ị ga-enweta bụ isi window na-amalite iPad weghachi mgbe jailbreak. Ị ga-ahụ naputa site na iTunes ndabere faịlụ mode. E gị niile iTunes ndabere faịlụ ga-egosipụta. Chọta ndabere gị iPad, họrọ ya na pịa Malite iṅomi na nri akuku wepụ ọdịnaya nke ya.
Nzọụkwụ 2. Weghachi iPad si jailbreak
Mgbe iṅomi okokụre, niile nkọwa nke ndabere na-amịpụtara na-egosipụta na edemede. Ịnwere ike ihuchalu na kaa ndị ị chọrọ iji naghachi ha niile na otu Pịa.
Nzọụkwụ 3. Do ndabere ọma
Iji zere adịkwa data na gị iPad, CHETA ndabere ya na kọmputa gị mgbe nile.
Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, na-eji Wondershare Dr.Fone maka iOS na ịrụ yiri iji weghachite gị iPad data, ma ọ bụ i nwere ike iji usoro ihe omume kpọmkwem iṅomi gị iPad na-agbake data site na ya mgbe ị na-adịghị a ndabere.